सबै लोकप्रिय पेनकिलरहरू किन्नुहोस् Wihout प्रिस्क्रिप्शन [भिसा, मास्टर, पेपैल र वायर]
दुखाइ के हो?
दुखाई यस्तो भावना हो जुन कसैले अनुभव गर्न चाहँदैन। हाम्रो वातावरणसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्षम हुनको लागि पीडा हाम्रो जीवन्त हुडको लागि आवश्यक छ, तर हामीले भोग्नु हुँदैन पीडा केही प्रकारको हुन्छ। सबैभन्दा नराम्रो प्रकारको दु: ख त्यस्तो किसिमको हुन्छ जुन छुटकारा पाउन गाह्रो छ, वा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, दुखाइ। दीर्घकालीन पीडाले व्यक्तिहरूको जीवनको सबै क्षेत्रहरूलाई असर गर्न सक्छ र सामान्य जीवनशैली कायम गर्न गाह्रो बनाउँछ।
केही प्राय जसो प्रशासित औषधोपचारहरू पेन्किलरहरू हुन् जुन दुबै हल्का र दीर्घकालीन दुखाई स्थितिका लागि प्रयोग गरिन्छ। ती शरीरको दुखाइ र टाउको दुखाइ, कमर दुख्ने र मांसपेशी दुख्ने साथै गम्भीर दुखाइ हटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन क्यान्सर जस्ता रोग वा पोस्ट अपरेटिभ दुखाइको रूपमा लिन सक्छ।
दुखाई व्यवस्थापन: दुखाइको लागि पेनकिलरहरू
तपाईलाई दैनिक पीडाको साथ बाँच्न आवश्यक पर्दैन। त्यहाँ केहि छ जुन तपाइँले चाहनु भएको पीडाबाट राहत पाउन सक्नुहुन्छ; र यो तपाइँको औंलाको छेउमा छ। अब तपाइँ तपाइँको पर्सनल पेनकिलर अनलाइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
पेन्किलरहरू पीडा नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो काम गर्नको लागि तपाइँले सिफारिश अनुसार पीडा राहत औषधि लिनु पर्छ। यदि तपाइँ यसलाई तोकिएको क्रममा लिनुहुन्न भने, त्यसो गरे जस्तो प्रभावकारी नहुन सक्छ यदि तपाइँले निर्देशनको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो भने।
कस्तो प्रकारको पेन्किलरहरू त्यहाँ छन्?
पेन्किलरहरू व्यापक रूपमा दमन गर्न र सबै प्रकारको दुबैलाई नियन्त्रण गर्न औषधीहरू प्रयोग गरिन्छ, चाहे तिनीहरू हल्का, गम्भीर वा दीर्घकालीन पीडा हो। तिनीहरू धेरै प्रकारका र फारमहरूमा उपलब्ध छन्, ब्रान्डेडको साथसाथै जेनेरिक संस्करणहरू, साथै निर्धारित काउन्टर औषधिहरूमा। तिनीहरूको प्रकार र सामर्थ्यको साथसाथै बिरामीको आवश्यकतामा निर्भर, तिनीहरूलाई ट्याब्लेट वा क्याप्सुलको रूपमा प्रशासित गर्न सकिन्छ, मौखिक रूपमा तरलको रूपमा, क्रीम वा मलहम जस्तै सामयिक अनुप्रयोगहरू, वा सीधा रक्तप्रवाहमा जान नसक्ने इन्जेक्सनको रूपमा। प्रत्येक केसमा उनीहरुलाई औषधी प्रयोग गर्नबाट रोक्नको लागि एक चिकित्सकले तोकेकै हिसाबले लिनु पर्छ, लागूऔषध दुरुपयोग सम्बन्धी राष्ट्रीय संस्थानको सिधा अपील र सिफारिस।
विभिन्न पेन्किलरहरू दु: ख कम गर्नका लागि कसरी प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझ्नको लागी एक आफैले ड्रग्सलाई बुझ्नु पर्छ। त्यहाँ पेनकिलरहरूको दुई आधारभूत वर्गीकरणहरू, मादक पदार्थ र गैर-मादक पदार्थ हो। जबकि मादक पदार्थहरू कडा पेन किलरहरू हुन जान्छन्, जबकि गैर-मादक पदार्थ दर्द निवारकहरू सामान्यतया काउन्टरमा उपलब्ध भएकोमा अधिक प्रयोग गरिन्छ। यहाँ पेन्किलरका विभिन्न प्रकारहरू छन्:
NSAID (गैर स्टेरोइडल विरोधी भड़काउने औषधि)
नन-स्टेरोइडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एक धेरै सामान्य प्रकारका दर्द किलरहरू हुन्। गैर-मादक पदार्थको रूपमा वर्गीकृत, यी पेनकिलर दुबै दुखाइ कम गर्दछ, जलन र सूजन कम गर्दछ र कम fevers गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरू धेरै जसो एसिटामिनोफेन जस्तो काम गर्दछन तर जोखिमपूर्ण हुन्छन् किनकि ती राम्रा साइड इफेक्टहरू जस्तै हार्ट अटैक र पेटको ब्लीडिंगमा हुन सक्छन् यदि राम्रोसँग लिईएन भने। यस ब्यानर अन्तर्गत साझा नामहरू एस्पिरिन जस्ता लागूपदार्थ हुन्। नेप्रोक्सेन, सेलेक्सोक्सिब, आईबुप्रोफेन र डिक्लोफेनाक। कुनै पनि स्टेरॉइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्सले यसको ठूलो असर पार्छ, रगत पातलो भएकोले। यसले थक्की मुद्दाहरू र कम रक्तचाप हुनेहरूका लागि समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ शल्यक्रियामा जाँदैछ। धेरै व्यक्तिहरू जसले शल्यक्रियामा प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेका छन् उनीहरूलाई प्रक्रिया अघि केहि हप्तासम्म कुनै पनि प्रकारको एनएसएआईडी नलगाउन आदेश दिइन्छ ताकि रगत फेरि गाढा हुन सकोस्।
यी प्यारासिटामोल आधारित पेनकिलरहरूको समूह प्राय जसो टाईलेनल भनिन्छ। अन्य पेन्डकिलर संयोजनहरूमा प्यारासिटामोल र कोडेइन Co-codamol, र प्यारासिटामोल र dihydocodeine जो प्याराकोडोल भनेर चिनिन्छ।
एसिटामिनोफेन लगभग NSAIDs जस्तै काम गर्दछ, दुबै एक पेन्डकिलर र ज्वरो रिडुसरको रूपमा कार्य गर्दछ। तिनीहरू बीच मुख्य फरक यो छ कि एसिटामिनोफेन एक विरोधी भड़काउन को रूप मा काम गर्दैन, न त यो NSAIDS जस्तै रगत पातलो।
एसिटामिनोफेन जो धेरै भारी पिउँछ वा जो कोही पनि कलेजोको रोगले ग्रस्त हुन सक्दैन। यस प्रकारको पेन्किलर कलेजोमा धेरै कडा हुन सक्छ, यदि यो राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन भने क्षति पुर्‍याउँछ। यो सिफारिश गरिन्छ कि यदि तपाइँसँग प्रति दिन दुई भन्दा बढी पेय पदार्थहरू छन् कि तपाइँ यस प्रकारको काउन्टर पेनकिलरमा लिनु अघि डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहुन्छ। एसिटामिनोफेन सामान्यतया काउन्टर औषधिहरूमा प्राय: प्रायः भेटिन्छ।
यी सबैभन्दा शक्तिशाली पेन्किलरहरू हुन् जुन डाक्टरहरूले तोक्न सक्ने हुन्छन्। धेरै जसो मादक पेन्किलरहरूले सिधा मस्तिष्क र केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा असर गर्छ, र डाक्टरको पर्ची वा पर्यवेक्षणको साथ मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ। मादक पेन्टकिलरहरूको तीन आधारभूत वर्गीकरणहरू छन्;
• प्राकृतिक मादक पेन्टकिलर - यी प्रकारका पेन्किलरहरू हुन् जुन सिधै अफिमबाट बनेको हुन्छ, र यसले मोर्फिन र कोडिन समावेश गर्न सक्छ। यी सामान्यतया एक पोस्ट शल्य चिकित्सा औषधि को रूप मा प्रयोग गरीन्छ।
Mi अर्ध-सिंथेटिक नार्कोटिक पेन्किलरहरू - यी पेन्किलरहरू हुन् जुन आंशिक प्राकृतिक र आंशिक रूपमा मानव निर्मित हुन्छन्, प्राकृतिक तत्वहरूमा भएका विभिन्न रसायनहरू सहित। यसमा अक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन र हेरोइन समावेश हुन सक्छ।
Nt सिंथेटिक मादक पदार्थको पेन्किलर- पूर्ण रूपले सिंथेटिक ओपियोइड्स र फेन्टानेल र सफेन्टनिल ड्रग्स समावेश गर्न सक्दछ। यी वर्गीकरणमा डेरिभेटिभहरूको लामो सूची पनि छ।
मादक पदार्थ दर्द निवारकको बानी हुने बानी हुन खतरनाक प्रवृत्ति हुन्छ, र तिनीहरूमा विरामीहरू डाक्टरले नजिकबाट निरीक्षण गर्नेछन्। प्रिस्क्रिप्शन औषधि दुरुपयोगको साथ, यसको अधिकांशतः दर्द निवारकहरूको यी प्रकारका हुन्छन्। मादक पदार्थहरू करीव चिकित्सा पर्यवेक्षण बिना लिनु हुँदैन।
पेन्किलरहरू कसरी प्रयोग गर्ने?
धेरै जसो दर्द निवारकहरू केहि दिनको लागि मात्र आवश्यक पर्दछ र अवस्था राम्रो हुँदैन जबसम्म कोही लामो समयसम्म दुखाइ भोगीरहेको छ जसमा अवधि अलि लामो हुन सक्छ। यद्यपि धेरै जसो पेन्किलरहरू काउन्टरमा किन्न सकिन्छ यो लिनु अघि चिकित्सक वा फार्मासिष्टसँग परामर्श लिन सल्लाह दिइन्छ, विशेष गरी यदि कसैले तिनीहरूलाई निर्धारित--दिन अवधिभन्दा बाहिर लिन चाहान्छ भने।
दर्द निवारकका साइड इफेक्टहरू के हुन्?
यद्यपि सबै प्रकारको पीडा समावेश गर्न सामान्य रूपमा प्रयोग गरिएको छ, तर पेन्किलरहरू आफ्नै साइड इफेक्ट र प्रतिक्रियाहरूको सेटको साथ आउँदछन्। धेरै जसो समय, औषधिको लामो समय प्रयोग वा अनावश्यक समायोजनले यी साइड-इफेक्टहरू र निर्भरताहरू निम्त्याउन सक्छ जुन प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा टोल लिन थाल्छ। यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि औषधिको क्षमताको साथसाथै औषधीको शक्ति पनि प्रभाव कसरी हुने एक परिणाम हो - हल्का वा घातक। लामो पेन्डकिलर प्रयोगका केहि साइड इफेक्टहरूमा एक हेराई।
• पेट समस्याहरु - पेट सम्बन्धी समस्या र अपच पेन्किलरको सबैभन्दा सामान्य दुष्प्रभाव हो। यी पखाला, कब्ज वा पेट दुखाइ को रूप मा प्रकट गर्न सकिन्छ। यीसँगसँगै प्रयोगकर्ताले कहिलेकाँही मतली र बान्ता सम्बन्धी मामिलाहरूको साथसाथै पेशाब समस्याहरूको पनि अनुभव गर्न सक्छ
• छाला समस्या - समय अवधिमा लिईन्छ, यी पेन्किलरहरूले धेरै छालाको समस्याहरू जस्तै रासा, खुजली र पित्तीहरू सम्मिलित गर्दछन्। छालाको अतिरिक्त संवेदनशीलता दर्दको किलरहरूको लामो प्रयोगको प्रत्यक्ष परिणाम हुन सक्छ।
• श्वासप्रश्वास समस्याहरू - लामो समयसम्म दुख्ने किलरहरूको प्रयोगले विभिन्न प्रकारको श्वासप्रश्वास समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ जस्तै छातीको संकुचन र संकुचन, मुटुको धडकन बढ्नु र सास फेर्न गाह्रो।
• गरीब दृश्य - पेन्किललर प्रयोगले धेरै दृष्टि समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ विशेष गरी यदि औषधिको शक्तिले गम्भीर साइड इफेक्टको चरणमा उन्मुख गरेको छ। यसले धमिलो दृष्टि र दृष्टिको परिधिमा माकुरो रेखाको भावना जस्ता परिस्थितिहरू समावेश गर्दछ।
• अचम्म र दुखाइ - यद्यपि तिनीहरू विभिन्न प्रकारका पीडाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ, लामो समयसम्म पेन्किलरहरूको प्रयोगले शरीरमा अन्य दुखाइ र पीडा हुन सक्छ जस्तै घाँटी र पछाडि दुखाइ र गम्भीर टाउको दुखाइ पनि हुन सक्छ।
• मनोवैज्ञानिक विकारहरू - औषधिको शक्ति र यसको लामो प्रयोगले मनोवैज्ञानिक विकारहरू पनि निम्त्याउन सक्छ र प्रयोगकर्ताहरूको जीवनमा असर गर्न सक्छ। यसमा साइड इफेक्टहरू जस्तै भ्रम र भ्रम, आन्दोलन र अधिक उत्तेजनाका साथसाथै केहि मा असामान्य lucid सपनाहरू समावेश हुन सक्छ।
पेन्डकिलर अनलाइन कसरी खरीद गर्ने?
यो पीडा राहत औषधिहरू अर्डर गर्न सरल छ जुन तपाईंलाई एक दर्द मुक्त जीवन शैली कायम गर्न आवश्यक छ। यो सजिलो र समस्या मुक्त छ। तपाईंलाई यी पेनकिलरहरू अनलाइन गर्न आदेशको आवश्यक पर्दैन। तपाईंको गोपनीयता पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ र तपाईं हाम्रो सुरक्षित दृष्य मा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको पेनकिलरहरू अनलाइन अर्डर गर्ने बारेमा राम्रो पक्ष केहि पर्ख छैन। ती दिनको एक मामला मा तपाइँको अगाडिको ढोका पठाउन सकिन्छ। तपाईको दैनिक पीडाबाट मुक्त हुन सजिलो उपाय कहिल्यै भएको छैन।
हाम्रो अनलाइन फार्मेसी पेशेवर र अनौपचारिक छ र यही कारण छ कि जब तपाईं अनलाइन पेनकिलरहरू खरीद गर्नुहुन्छ तपाईं यो निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईंको गोपनीयता हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। सबै अर्डरहरू फार्मेसी लेबल बिना पठाइन्छ ताकि सबै अर्डरहरू गोप्य राख्न सकिन्छ। तपाईंले फार्मासिष्टको साथ आमने सामने कुरा गर्नु पर्दैन वा अन्य अर्का पसलहरू हेरिरहनु भएको छैन।
तपाईलाई र तपाईलाई भएको दुखाईको लागि छनौट र निर्णय गर्नको लागि त्यहाँ धेरै बिभिन्न औषधिहरू छन्। बिभिन्न औषधिहरुको बिभिन्न प्रयोग हुन्छ र सबैको लागी हुँदैन। तपाईंले लागू गर्ने सबै सर्तहरूको मुल्या .्कन गर्नुपर्दछ र सावधानी अपनाउनुहोला कि अर्को पूर्व अवस्थित अवस्थामा हस्तक्षेप नगर्ने वा तपाईंले पहिले नै लिईरहनुभएको अन्य औषधीहरूको साथ हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। एक अनलाइन फार्मासिष्टले तपाईंलाई तपाईंको लागि उत्तम छनौट निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंको पीडा राहत आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।